जव बच्चा रोयो खुसीको सिमा रहेन………. - Gulminews
जव बच्चा रोयो खुसीको सिमा रहेन……….
२०७७ असार २३, १९:००
गुल्मी, २३ असार । रेसुङ्गा नगरपालिका १० की शिखा पाण्डेय प्रसुति व्यथाले च्यापेपछि असार १८ गते राति गुल्मी अस्पताल आइन् । उनको स्वास्थ्य परिक्षण सुरु गरियोे । डाक्टरहरुले पाण्डेयमा सालनाल पहिले र बच्चा पछि भएको पत्तो पाए ।
गुल्मी अस्पतालका सूचना अधिकारी समेत रहेका डाक्टर कासीराम विकका अनुसार सामान्यतया बच्चा पहिले र पछि मात्रै सालनाल हुने गर्दछ । प्रसुतिको बेला सालनाल पहिले भए बच्चाको ज्यान जाने संभावना अत्यन्तै धेरै हुन्छ । पाण्डेयको पनि शल्यक्रिया बाहेक अरु उपाय थिएन । यस्तो अवस्थामा पुरा शरिर बेहोस बनाएर शल्यक्रिया गर्ने गरिन्छ । तर पुरा शरिर बेहोस पार्ने गुल्मी अस्पतालमा जिए मेसिन थिएन । तत्काल रेफर गर्ने स्थिती समेत भएन । डाक्टरहरुले जोखिमको बारेमा परिवारलाई जानकारी गराएर शल्यक्रियाको निधो गरे । परिवारकै आग्रहमा डाक्टर कासीराम विक र सरोजा गैरैसहितको चिकित्सकको टोलीले सफल शल्यक्रिया गरे । अहिले आमा र बच्चाको अवस्था सामान्य रहेको छ ।
पहिलो गर्भमै प्रसुति जटिल भएकाले शिखा पाण्डेय पनि चिन्तामा थिइन् । प्रसव पीडासंगैको नयाँ समस्याले उनीसंगै परिवारनै शोकमा थिए । परिवारको साथ र डाक्टरहरुको कार्यकुशलताले सफल शल्यक्रिया भयो । नयाँ जीवन पाएकी शिखा र श्रीमान हरि पाण्डेय दुवै खुसी भए । ‘शल्यक्रियाभर रोएर बसेँ, जब बाहिरबाट बच्चा रोएको सुने खुसीको सिमा रहेन, त्योभन्दा झन धेरै आमा र बच्चा ठिकठाक देखेर खुसी भएँ,’श्रीमानले भने,‘अब्बल सेवा प्रबाहका लागि अस्पताललाई धन्यबाद ।’ अस्पतालमै आराम गरिरहेकी शिखा पनि खुसी छन् । आफ्नो र बाहिरको अवस्था जटिल भएको बेलामा घर नजिकै सेवा पाउनु आफ्नो लागि ठुलो बरदान भएको बताइन् । यो प्रकारको शल्यक्रिया जिल्लामै पहिलो भएको अस्पतालको दाबी रहेको छ ।
त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका २ की शान्ति परियारको पनि जटिल शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्मिएको छ । परियार असार १० गते प्रसुति व्याथाले च्यापेपछि गुल्मी अस्पताल आइपुगिन् । उनको चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य परिक्षण थाले । आमाको उच्च रक्तचाप र बच्चाको मुटुको धडकन कम थियो । गुल्मी अस्पतालको डाक्टर सरोजा गैरैका अनुसार यो अवस्था आमा र बच्चाको लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो । प्रसब सुरु भएकाले बाहिर रेफर गर्ने अवस्था थिएन् । आर्थिक अवस्थाको कारण परिवारले पनि बाहिर लैजान मानेनन् ।
परिवारकै सहमति र आग्रहमा डाक्टर कासीराम विक र सरोजा गैरेले सफल शल्यक्रिया गरे । १२ सय ग्रामको बच्चा जन्मियो । सामान्य अवस्थामा बच्चा २५ सय ग्रामको हुन्छ । यो बच्चाको तौल थोरै भए पनि शारीरिक रुपमा स्वस्थ रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । पछिल्लो समय गुल्मी अस्पतालको कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकहरुको विश्वास बढ्दै गएको छ । सामान्य स्वास्थ्य समस्या आए पनि पाल्पा, वुटवल र काठमाण्डौ पुग्नुपर्ने गुल्मी र अर्घाखाँचीका नागरिकको बाध्यता अहिले गुल्मी अस्पतालका प्रमुख उत्तम पच्या र उनको टोलीले दुर गरेको नागरिक समाजका संयोजक पदम पाण्डेयले बताए ।
सिमित स्रोत र साधनकाबिच नागरिकहरुको साथ र हौसलाले आफुहरुलाई सेवा गर्ने आत्मविश्वास बढेको गुल्मी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पच्याले बताए । उनले गुल्मी अस्पतालमा आफुहरुले जटिल शल्यक्रिया थुप्रै गरे पनि पछिल्ला दुई शल्यक्रिया थप जटिल भए पनि सफल भएको बताए ।